Inkosazane kaMaMdletshe ibheke esicongweni – Nongoma
Inkosazane kaMaMdletshe ibheke esicongweni
Published by Nongoma-Admin2 at May 18, 2018
UNONGOMA udume ngezinto eziningi. Lendawo eyiHlalankosi leSILO esibusayo ivame ukuba sematheni ngenyanga kaMandulo nokuyilapho amakhulu ngamakhulu ezintombi ezisuke ziliqhamukisa kuzo zonke izingxenye zezwe zisuke zibabele khona. Lapha zisuke zesabela ukumemeza koNgangezwe Lakhe. Nonyaka lendawo izongena emlandweni njengendawo yasemakhaya ekhiqize uzime ongenele isicoco sika Miss South Africa. Kanti okunye umphakathi waseNingizimu Afrika ozokuthola wukuthi lentokazi egamalayo kungu Noxolo Ndebele kayizenyezi ngokuthi ivela kulendawo yasemakhaya.
UNoxolo noyinkosazana kaMfundisi uJoshue Ndebele weBandla i-Assemblies of God kanye noMankosi Ndebele uMaMdletshe onguthisha endaweni yakwaNongoma.
Ikhuluma neBayede lendoni yamanzi ichaze ubumqoka besikhathi ekuso nethe asisona isibusiso nje kuyo kuphela kepha ibona nendawo yangakubo ingazuza. “Ithuba engilitholile angilithathi kancane neze. Ngiyazi ukuthi lingenxa yemikhuleko nezifi so zabantu abaningi, kusuka ekhaya lapho ngizalwa khona, ozalweni nasemphakathini wakwaNongoma okuze kube yimanje ngihambela phezulu ngoba ngithwelwe yiwo ngeqoma,” kusho uNoxolo.
Lentokazi yize isendaweni lapho noma yiyiphi intokazi efi sa ukuba kuyo ithi zikhona izinto ezimqoka okumele owesifazane ongenele uMiss SoutH Africa kumele angaqheli kuzo. “Ngikholwa wukuthi intokazi ezoba nguMiss South Africa ozayo kumele kube yintokazi ezigqajayo ngobuyona, isiko layo nemuva layo. Lena kumele kube yintokazi ebungaza ukuba ngumuntu wesifazane nowabelana okuhle nomphakathi avela kuwo,” kusho uMaNdebele.
Uqhubeke wathi: “Ngiyakholwa ukuthi ithuba engilitholile kumele ngakhele kulo ukulekelela amanye amantombazane endaweni. Nami ngiletha amakhono athize nengingangabzi ukuthi ayolekelela izwe lakithi.”
Ukhulume ngobumqoka bokubekezela nokuwa uvuka nathe naye kumakhile kulokhu ayikho namuhla. Uveze nangezifi so zakhe ngale komcintiswano kaMiss South Africa nathe zihlanganisa ukuba ngusomabhizinisi kanye nokuzibandakanya ezinhlelweni zomphakathi wakwaNongoma kakhulukazi lezo ezithuthukisa, zicija nezivikela ingane yentombazana. Phakathi kwabantu athe ubukela kubo nxa kufi ka kwabesifazane namabhizini uthe yiloyo oke wanqoba esikaMiss South Afrika uBasetsane Kumalo nathe phakathi kwezinto azithanda ngaye wukuzigqaja kwakhe njengosomabhizinisi wesifazane nowoHlanga.
Nxa ekhuluma ngabazali bakhe ugcwala ukubabatheka. “Abazali bami bayikho konke kimi. Umama uMaMdletshe ungunkosikazi wokholo nongifundezi intobeko nokuhlale njalo ngimamatheka,” kusho lentokazi ngothotho lwamazinyo.
Iqhube yathi ngezenzo abazali bayo bayifundise lukhulu ngempilo “Abazali bami bangifundise ukupha, ukunakekela nokubonelela. Yize bebengenakho okuningi kepha kulokho uNkulunkulu abaphe khona babelane nathi nabanye abantu abaningi. Ngiyaziqhenya ngabo,” kuchaza uNoxolo.
Ekhuluma ngendawo yangakubo uthe njengazo zonke izindawo ifanele ngokugcono, okubalwa ingqalasizinda kanye namakhono. “Ngizimisele ukusebenza nezinhlaka ezikhona zomphakathi ukuze name ngiphose esivivaneni. Emhlanganweni wami kanye neMeya nabaphathi boMkhandlu ngisivezile isifi so sokuba yingxenye yokwakha uNongoma. Njengoba isiqubulo soMkhandlu sisho, ngithi singuNongoma kumele sizakhe futhi sizenzele. Lelo yivangeli okumele silitshale kithi nsukuzonke ngoba kuqala kithi,” kusho uNoxolo.
Lentokazi yakwaNongoma isohlwini lokugcina lwezintokazi eziyi-12 eseziyoncintisana kowamanqamu ngoMgqibelo ozayo mhla zingama -27 kuNhlaba. Umcimbi uzobanjelwa eSun Arena Square.
HIS WORSHIP, THE MAYOR M.A. MNCWANGO’S STATEMENT ON CORONAVIRUS PANDEMIC
IMeya yentsha uMpatho Nxumalo efakwa umgexo wobumeya
Intsha nokushaywa nokweluswa kwemithetho
IDP Roadshows 2018/2019
© Copyright Nongoma Local Municipality 2018 | Ingabadi Media Group